သူများပြောတိုင်း မယုံတဲ့ စကာင်္ပူ Remdesivir ကို ကိုဗစ်ကုသရာတွင် ထိရောက်မရောက် စတင်စမ်းသပ်သုံးစွဲ – Na Pann San
သူများပြောတိုင်း မယုံတဲ့ စကာင်္ပူ Remdesivir ကို ကိုဗစ်ကုသရာတွင် ထိရောက်မရောက် စတင်စမ်းသပ်သုံးစွဲ
Na Pann San W | May 5, 2020 | International News | No Comments
Remdesivir ကို စင်ကာပူမှာ စပြီး စမ်းသပ်သုံး စွဲမယ်လို့ စင်ကာပူ NCID ကူးစက်ရောဂါဌာန က Dr Shawn Vasoo ကပြောပါတယ်။ ဒီလို စင်ကာပူမှာ စတင် သုံးစွဲခြင်းကြောင့် ကျနော်တို့အနေ နဲ့ ပိုမိုနီးစပ် တဲ့ စမ်းသပ်မှုအဖြေတွေကို သိရမယ် ။ Dr Shawn Vasoo က သေချာအောင်ထပ်ပြော ပါတယ်…. အခုထိ Covid-19 အတွက် တကယ့်အသိအမှတ်ပြုတဲ့ဆေး မရှိသေးပါ ။
Dr Shawn Vasoo
Remdesivir ကို အမေရိကန် FDA က မေလ 1 ရက်နေ့မှာ အရေးပေါ်ကုသဆေးအဖြစ်ခွင့်ပြုချက် (Emergency Use Authorization) ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့် လူနာအကုန်လုံးကို ကုတာမဟုတ်ပဲ စင်ကာပူမှာ clinical trial စမ်းသပ်ကုသတာပဲ လုပ်ပါမယ်။ Remdesivir က 2016 လောက်တုန်းက အာဖရိကတိုက်က DRC မှာ အီဘိုလာရောဂါဖြစ်တုန်းက ကုသဖို့စစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနှစ်ကတုန်းက အဲ့ဒီဆေးမှာ monoclonal antibody drug လောက်မကောင်းလို့ ရပ်တန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူများပြောတိုင်း မယုံတဲ့ စကာင်္ပူ Remdesivir ကို ကိုဗစ်ကုသရာတွင် ထိရောက်မရောက် စတင်သုံးစွဲကြည့်ပြီ …
ဒါ့ကြောင့် စင်ကာပူအနေနဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က စမ်းသပ်မှုနဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်မှုအဖြေကို စောင့်ကြည့်ပါမယ်တဲ့။ monoclonal antibody drug နဲ့ ပတ်သက်လို့ အစ္စရေးမှာ အောင်မြင်မှုတစ်ဆင့်တိုးလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစ္စရေးဇီဝသုသေသနပညာသင်ကျောင်း (IIBR) အနေနဲ့ monoclonal neutralising antibody ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ရယူနိုင်လိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလို monoclonal နည်းအနေနဲ့ ပြန်ကောင်းလာတဲ့ ဆဲလ်တစ်လုံးကပဲ antibody ခုခံမှုကို ရယူတာမို့လို့ ပိုပြီးတော့ အစွမ်းထက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ polyclonal လို့ခေါ်တဲ့ ဆဲလ်နှစ်လုံး သို့မဟုတ် ပိုမိုတဲ့ပမာဏကနေ ရယူရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုတွေ့ရှိမှု ဖော်မြူလာကို အစ္စရေးက မူပိုင်ခွင့်တင်ထားပြီး ကျလာရင် အမြောက်အများထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Remdesivir ကို စငျကာပူမှာစပွီး စမျးသပျသုံးစှဲမယျလို့ စငျကာပူ NCID ကူးစကျရောဂါဌာနက Dr Shawn Vasoo ကပွောပါတယျ။ ဒီလို စငျကာပူမှာစတငျသုံးစှဲခွငျးကွောငျ့ ကနြျောတို့အနနေဲ့ ပိုမိုနီးစပျတဲ့ စမျးသပျမှုအဖွတှေကေို သိရမယျ။ Dr Shawn Vasoo က သခြောအောငျထပျပွောပါတယျ…. အခုထိ Covid-19 အတှကျ တကယျ့အသိအမှတျပွုတဲ့ဆေး မရှိသေးပါ။
Remdesivir ကို အမရေိကနျ FDA က မလေ 1 ရကျနမှေ့ာ အရေးပျေါကုသဆေးအဖွဈခှငျ့ပွုခကျြ (Emergency Use Authorization) ပေးပါတယျ။ဒါကွောငျ့ လူနာအကုနျလုံးကို ကုတာမဟုတျပဲ စငျကာပူမှာ clinical trial စမျးသပျကုသတာပဲ လုပျပါမယျ။ Remdesivir က 2016 လောကျတုနျးက အာဖရိကတိုကျက DRC မှာ အီဘိုလာရောဂါဖွဈတုနျးက ကုသဖို့စစမျးသပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မနှဈကတုနျးက အဲ့ဒီဆေးမှာ monoclonal antibody drug လောကျမကောငျးလို့ ရပျတနျ့ပဈခဲ့ပါတယျ။
သူမြားပွောတိုငျး မယုံတဲ့ စကာင်္ပူ Remdesivir ကို ကိုဗဈကုသရာတှငျ ထိရောကျမရောကျ စတငျသုံးစှဲကွညျ့ပွီ …
ဒါ့ကွောငျ့ စငျကာပူအနနေဲ့ ကမ်ဘာအရပျရပျက စမျးသပျမှုနဲ့ သူတို့ကိုယျတိုငျ စမျးသပျမှုအဖွကေို စောငျ့ကွညျ့ပါမယျတဲ့။ monoclonal antibody drug နဲ့ ပတျသကျလို့ အစ်စရေးမှာ အောငျမွငျမှုတဈဆငျ့တိုးလာတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အစ်စရေးဇီဝသုသသေနပညာသငျကြောငျး (IIBR) အနနေဲ့ monoclonal neutralising antibody ကို အောငျအောငျမွငျမွငျ ရယူနိုငျလိုကျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အခုလို monoclonal နညျးအနနေဲ့ ပွနျကောငျးလာတဲ့ ဆဲလျတဈလုံးကပဲ antibody ခုခံမှုကို ရယူတာမို့လို့ ပိုပွီးတော့ အစှမျးထကျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အရငျတုနျးကတော့ polyclonal လို့ချေါတဲ့ ဆဲလျနှဈလုံး သို့မဟုတျ ပိုမိုတဲ့ပမာဏကနေ ရယူရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အခုတှရှေိ့မှု ဖျောမွူလာကို အစ်စရေးက မူပိုငျခှငျ့တငျထားပွီး ကလြာရငျ အမွောကျအမြားထုတျလုပျဖို့ ကွိုးစားမယျလို့ဆိုပါတယျ။
အီရန်ဗိုလ်မှူးချုပ် တစ်ဦး ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကြောင့် သေဆုံး
အမေရိကန် သမ္မတ ထရန့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေ စဉ် အိမ်ဖြူတော် အပြင် ဖက် ၌ ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
ကိုဗစ် အန္တရာယ်ကို မျက်ကွယ်ပြုလျက် လူထောင်ချီစုပြီး ပွဲလုပ်တဲ့ ထရမ့်ရဲ့ သမိုင်းတွင်မယ့် ပြောစကားများ ( သို့ ) စင်ပေါ်က ဟာသ သမ္မတ